Successzọ ịga nke ọma n'ịntanetị |ga nke Ọma | Martech Zone
Reachlocal etinyela ihe omuma a na ụzọ iji nweta ihe ịga nke ọma n'ịntanetị.
Dị ka obere azụmahịa na-asọ mpi ndị dike maka ire ere n'oge ezumike ahụ, ị ​​nwere ike ịnwa ịkpọ "cannye nwere ike iti mkpu karịa?" egwuregwu. Ọ bụghị naanị na nke a siri ike na obere azụmaahịa 'oge na mmefu ego, mana ọ nwekwara ike ịhapụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ị rụrụ ọrụ siri ike. Yabụ, kedu ihe ị ga - eme n'oge ezumike a iji zụọ obere azụmaahịa gị ma nụ n'agbanyeghị nnukwu ndị asọmpi? Soro ụzọ iji nwee ihe ịga nke ọma na infographic Small Business Saturday anyị ma gbalịa ndụmọdụ ise ndị a iji kwalite onyinye mpaghara gị n'oge obere azụmaahịa Satọde na oge ezumike.
O di nwute, echere m na Reachlocal kwụsịrị infographic na ebe dị egwu. Ihe ịga nke ọma anaghị amalite mgbe ị gbanwere onye ndu ka ọ bụrụ onye ahịa. Ọganiihu nke mgbasa ozi mmekọrịta na-abịa n'ezie mgbe ị gbanwere onye ahịa ahụ ịbụ onye ofufe! Ikwurita nke oma na ndi ndu gi na ndi ahia gi bu ihe di nkpa, ma gbaa ha ume ka ha kesaa ihe omuma ha di nma na ika gi site na ntule, nkwanye, na mmekorita ndi mmadu bu mgbe ulo oru na achoputa ihe ha choro!
Tags: infographiconline ahịaihe ịga nke ọma n'ịntanetịChọọ Marketingelekọta mmadụ media
Deploy, Ree, ma Jikọọ na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Formstack